KwiNursery Cottages B&B
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguRory
Ngecandelo lakho lendlu enkulu, iB&B yethu ibonelela ngeendwendwe indawo efanelekileyo emva kosuku ngaphandle kwiiHighlands. Ngokungena ngasese endlwini i-B&B inegumbi elikhulu eliphindwe kabini eline-Sky TV, igumbi lokuhlambela elineshawa / indibaniselwano yokuhlambela kunye nesidlo sakusasa esimnandi kusasa esiqinisekileyo ukuba silungiselele usuku oluzayo!
IB&B yethu kulapho yaqala khona.
Ime kwicandelo layo lendlu enkulu, iB&B yethu ibonelela ngeendwendwe ummandla wazo zonke. Ngokungena kwakho kunye nesitshixo sepropathi, igumbi lakho lokulala, igumbi lokuhlambela kunye nepaseji yeyakho ukuba uyonwabele ngasese.
Ngebhedi enkulu ephindwe kabini, iSky TV, indawo yomlilo kunye nodonga lwamatye igumbi lethu elipholileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokulala ubusuku obumnandi emva kosuku lokuphonononga iiHighlands.
Igumbi lokuhlambela elahlukileyo linika indibaniselwano yeshawa/ibhafu kunye nezinto zokuthambisa ezincomekayo kunye neetawuli ezithambileyo ezithambileyo ekufikeni kwazo.
Kusasa isidlo sethu sakusasa esixatyiswa kakhulu siqinisekile ukuba siya kukulungiselela uhambo lwakho oluya phambili. Khetha kwisidlo sakusasa saseSkotlani esigcweleyo esinemveliso yalapha ekhaya, ukhetho lweesiriyeli, izonka ezenziwe ekhaya kunye nezigciniweyo. Zonke izidlo zakusasa ziphekwe ukuze ziodolwe kodwa ndiyakuqinisekisa, kufanelekile ukulinda!
Ukuba sembindini wezona ndawo zidumileyo kwi-Highlands; I-Skye, i-Fort William, i-Oban, i-Nevis Range, i-Loch Ness (kunye nokuba kwindlela ye-North 500 yeendleko) uqinisekile ukuba uchithe ukhetho.
Umamkeli wethu kunye noMnini, ngoMeyi, ubekwishishini lokwamkela iindwendwe ngaphezulu kweminyaka engama-40 kwaye eqhuba iNursery Cottages Chalet iminyaka eyi-8 - qiniseka ukuba usezandleni ezikhuselekileyo.
Sijonge ngolangazelelo ukubhukisha kwakho kwaye samkele nayiphi na imibuzo onayo.
4.71 ·Izimvo eziyi-41
I-Invergarry yilali encinci yasemaphandleni ekuMntla Ntshona weSkotlani. Ibekwe ngokufanelekileyo kumbindi wezona ndawo zidumileyo kwii-Highlands ezine-Inverness, iSkye, iFort William, i-Oban kunye ne-Aviemore zonke ngaphakathi kweyure yokuqhuba.
Umbuki zindwendwe ngu- Rory
Ngamana angabamba amava akho ukusuka ekufikeni ukuya ekuhambeni - nayiphi na imibuzo onokuba unayo okwangoku mna (Rory) ndingavuya kakhulu ukukucebisa ngokuthumela umyalezo kwi-app okanye unditsalele umnxeba ku-07919898051.
Iinkcukacha zoqhagamshelwano zikaMeyi ziyafumaneka ngesicelo kwaye ziya kuthunyelwa kuzo zonke iindwendwe kwiiyure ezingama-24 ngaphambi kokufika.
Ngamana angabamba amava akho ukusuka ekufikeni ukuya ekuhambeni - nayiphi na imibuzo onokuba unayo okwangoku mna (Rory) ndingavuya kakhulu ukukucebisa ngokuthumela umyalezo kwi-app…